262.5 tapitrisa dolara amerikana azo avy amin'ny fizahan-tany Curacao tao anatin'ny 5 volana voalohany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » 262.5 tapitrisa dolara amerikana azo avy amin'ny fizahan-tany Curacao tao anatin'ny 5 volana voalohany
Ny fahatongavan'ireo stayover ankapobeny tamin'ny volana Mey dia tsara, nandrakitra fitomboana 7%, hoy ny tatitra nataon'ny Curacao Tourist Board (CTB).
Ny fahatongavan'ireo stayover ankapobeny tamin'ny volana Mey dia tsara, nandrakitra fitomboana 7%, hoy ny tatitra nataon'ny Curacao Tourist Board (CTB). Nahatratra 31,251 ny fahatongavana stayover no noraisina tamin'ny volana Mey izay nanisana ny fahatongavan'ny stayover 29,196 13,844 tamin'ny taon-dasa. Curacao dia nandray mpitsidika stayover 14 avy any Netherlands, ny firenena mpamokatra lehibe dia nanidy ny volana Mey tamin'ny fitomboana indroa 13,000%. Sambany teo amin'ny tantara no nihoaran'ny mpitsidika 44 avy any Holland tamin'ny volana Mey ny firenena. Netherlands dia manohy ny firenena mitarika izay misy ny 1,361% ny anjara avy amin'ny fahatongavan'ny stayover. Ny firenena lehibe faharoa any Eropa dia i Alemana. Tamin'ity taona ity tsy nisy serivisy mivantana avy any Alemana 9 12 mpitsidika alemanina no voasoratra anarana, fihenan'ny 2018% ny fahatongavan'ireo stayover. Amin'ny ankapobeny, ny faritra eropeana dia nitombo 16,675% tamin'ny Mey XNUMX. Nahatratra XNUMX ny mpitsidika stayover no voarakitra.
Ny CTB dia nisoratra anarana mpitsidika stayover 7,012 avy any Amerika Avaratra tamin'ny Mey 2018, ary i Amerika Avaratra no mpandray anjara lehibe faharoa amin'ny fahatongavan'ireo mpitsidika. Curacao dia nandray mpitsidika stayover miisa 1,089 avy any Canada. Ny faharetan'ireo sidina WestJet tamin'ny volana Mey dia nahatonga mpitsidika kanadiana 66% betsaka kokoa noho ny Mey 2017. Avy any Etazonia any Etazonia, fiakarana 14% no voasoratra tamin'ny Mey 2018. Raha atotaly dia mpitsidika stayover 5,923 no voasoratra ara-panjakana. Tamin'ny taon-dasa, Curacao dia nandrakitra fahatongavan'ny stayover 5,186 avy tany Etazonia. Ny tarehimarika tsara avy any Etazonia dia ny vokatry ny sidina faharoa isan-kerinandro miala an'i Charlotte sy ny fampakarana fitaovana miaraka amin'ny American Airlines avy any Miami.
Ireo firenena mifantoka ambaratonga faharoa avy any Amerika atsimo dia nahavita nandrakitra fitomboana avo roa heny. Avy any Kolombia, ny isan'ny nosy dia nanoratra fisondrotana 11% ka hatramin'ny mpitsidika stayover 1,114. Ny fiakaran'ny fahatongavan'ireo stayover dia vokatry ny ezaka marketing. Ny fifamoivoizana avy any Brezila dia nandrakitra fitomboan'ny 24% tamin'ny Mey 2018. Tamin'ny fitambarany, 755 Breziliana no noraisina an-tanan-droa. Nahatratra 1,799 ny mpitsidika Karaiba no noraisina tamin'ny Mey 2018. Avy amin'ny nosy mpifanolo-bodirindrina Aruba, fitomboana 4% no voasoratra anarana. Mpitsidika Aruban 977 no tonga tany Curacao tamin'ny Mey.
Janoary hatramin'ny Mey Fitsidihan'ny mpitsidika 2018
Nandritra ny 5 volana voalohany tamin'ny taona 2018, dia mpitsidika holandey 74,371 67,560 no noraisina. Tamin'ny taon-dasa tamin'io fe-potoana io ihany, 10 ny mpitsidika holandey no isaina, fitomboana 11%. Avy any Etazonia any Etazonia, ny fitomboana isan-taona dia voarakitra 29,249%, manisa 2018 2017 ny mpitsidika amerikana nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny mey 26,395. Tamin'ny taona 7, Curacao dia niarahaba ny fahatongavan'ireo stayover 12,837 5 avy tany Etazonia. Kanada dia nitombo tamin'ny fandraketana mpitsidika 2018%, nanisa XNUMX XNUMX tonga stayover tamin'ny XNUMX volana voalohany tamin'ny XNUMX.
Ny fahatongavan'ireo stayover tamin'ny ankapobeny tao anatin'ny 5 volana voalohany dia nijanona ho fisaka raha oharina tamin'ny taona lasa. Curacao dia nandray tsara ny mpitsidika stayover 173,984 5 tao anatin'ny 2018 volana voalohan'ny taona 6. Raha nesorina tamin'ny totalin'ny fahatongavan'ny stayover ny fanisana ny fizahan-tany ho an'i Venezoela dia tokony hitombo ny 10,404%. Ity dia totalin'ny mpitsidika 262.5 hafa. Ny fahatongavan'ireo stayover isan-taona dia mampiseho ihany koa ny fitomboana matanjaka avy amin'ireo tsena ifantohana. Nisy fiatraikany mivantana $ 5 tapitrisa dolara amerikana namboarina ho an'ny toekarena eo an-toerana tao anatin'ny 2018 volana voalohany tamin'ny taona 47. 123.1% amin'ny totalin'ny fiatraikany mivantana dia avy amin'ireo mpitsidika eropeana izay tompon'andraikitra amin'ny $ 692 tapitrisa dolara amerikana. Ny fiatraikany ara-toekarena mivantana avy amin'ny faritra sisa dia toy izao manaraka izao: Amerika Avaratra $ 37.2 tapitrisa, Amerika atsimo $ 33 tapitrisa, ary Karaiba / faritra hafa $ XNUMX tapitrisa.
Sambo mpizahatany milentika ao amin'ny farihin'i Missouri, farafaharatsiny mpandeha 8 no maty
Boeing dia nanambara $ 100 miliara amin'ny baiko sy fanoloran-tena ao amin'ny Farnborough Airshow